Ihe omume mgbatị na-eme kwa ụbọchị maka ụmụaka 3-6 afọ
Ọrụ nke ndị nne na nna bụ ịkụziri nwatakịrị ahụ na mgbatị ahụ kwa ụbọchị. Ikekwe, nke a bụ ihe siri ike. Karịsịa maka ezinụlọ ndị ebe ndị okenye anaghị etinye oge zuru ezu maka egwuregwu na ọdịbendị anụ ahụ. Ka o sina dị, ndị nne na nna na-eto eto ugbu a ghọtara na ahụike dị ugbu a na-ewu ewu na ịtọ ntọala ya dị mkpa site na nwata. Obi abụọ adịghị ya na ihe ịga nke ọma nke ụmụaka bụ nanị nne na nna.
N'okpuru ebe a bụ ihe omume maka ndị na-eto eto. Ha niile dị ka egwuregwu. Ụmụaka na-eji obi ụtọ eme ha. Otú ọ dị, uru ha adịghị enweta site na nke a.
Ogologo oge nke ihe omume kwa ụbọchị ga-adị site na minit 10 ruo 25. Oge a zuru ezu iji mee ihe omume nke na-emetụta akụkụ ahụ ike dị iche iche na usoro ahụ.
Nke mbụ, nwezie mmemme mbụ 10-12. Jiri nwayọọ nwayọọ tinye otu ma ọ bụ abụọ omume na usoro nke ha na-ebe a.
Nwatakịrị ahụ na-abịakwute onye toro eto na-eji aka ya agbatị. Rebenokostanavlivaetsya, na-ebuli aka ya na mkpịsị aka na-agbalị imetụ aka ya aka. A na-eme mmega ahụ ugboro ise.
2. "Na nhazi"
Kid na-aga n'ahịrị n'ihu: dọta ụkwụ, tinye ụkwụ ya n'ogo ụkwụ. Buru ụzọ tinye aka na ogwe ahụ, mgbe ahụ ọ na-eje ije, na-arụ ọrụ aka ya. Onye toro eto kwesịrị igosi nwatakịrị otú a ga esi eme ya.
A na-eme mmega ahụ n'ime 20-30 sekọnd.
3. "Egwú na-agba elu"
Obere nfe na-awụda na nkwonkwo abụọ: elu-igwe. Ọ nwere ike ibuli aka ya n'akụkụ.
Rebenokokizobrazhaet ụgbọ elu, ebe o nwere ike ịgba, nku aka na-aga n'akụkụ dị iche iche.
5. "Osisi osisi"
Gosi nku oku esi egbutu osisi. Kwe ka o megharia mmeghari a. Anyị na-etinye ụkwụ na obosara nke ubu, na-agbanye nnukwu nkedo ma jiri anyụ ike tụọ axi na "log", gbadaa ogwe ala, aka n'etiti ikpere. Mgbe ị na-amanye, kwuo "ah."
Tinyegharịa ugboro ugboro ugboro iri.
Nke a bụ mmega ahụ bara uru maka abụọ. Di na nwunye nwere ike ịbụ nne ma ọ bụ nna (ọ ghaghị imezi onwe ya maka ike nwatakịrị). Guzo ihu na ibe gị ma na-emetụ sọks, jide aka. Otu akụkụ, nke ọzọ, mgbe ahụ, onye mbụ na-ebili, na nke abụọ.
Nwa ahụ na-ebili na anọ anọ - ogwe aka ekpe na ụkwụ aka nri n'ihu ma ọ bụ akaebe wee malite ịkwaga. Ụkwụ anaghị ehulata na ikpere.
A na-eme mmega ahụ n'ime 15-20 sekọnd.
8. "Nnụnụ na-efe efe"
Ụmụ na-eguzo n'elu aka, aka na-egosipụta nnụnụ na-efe nku ya.
Nwatakịrị ahụ na-ejide aka ya n'ihu igbe na n'azụ ya, na-ebu ụzọ guzo, ma na-agagharị.
10. "Ife Mmiri ahụ"
Umu umuaka, gosiputa nti nke ugbo ya na aka ya ma jiri oso na-agba oso.
Na-agba ọsọ 8-12 ugboro.
11. "Steam locomotive"
Nwatakịrị ahụ na-eme ka mmeghari okirikiri na aka ya na mbụ, ma mgbe ị na-eje ije. Na-ebuli elu ka ọ dị mkpa n'elu. Iwu ndị okenye: "gaa n'ihu", "gbanwee"! Ị nwere ike ịza, mee ka ụda "chuh-chuh", wdg.
Imega na-ewe 20-30 sekọnd.
12. "New cracker"
Nwatakịrị ahụ na-eguzo n'otu ebe ma kụọ aka ya n'otu n'otu n'isi ya na n'okpuru ikpere ụkwụ ya.
Imega na-ewe 15-20 sekọnd.
13. "Were m ụkwụ gị"
Nwatakịrị ahụ dinara azụ, onye toro eto na-eguzo n'elu ya, na-esetị aka ya. Nwatakịrị ahụ na-ebuli ụkwụ ya n'akụkụ ọzọ, na-agbalị imetụ aka gị aka.
Jiri ụkwụ asatọ mee ihe 6-8.
Nwatakịrị ahụ na-abanye na anọ, na-adaghachi azụ, na-atụghachi isi ya. Mgbe ahụ, ọ na-emegharị gburugburu, na-ehicha isi ya n'obi.
Na-agba ọsọ ugboro 5-6.
N'anya, nwatakiri ahụ na-ebuli aka na ụkwụ. Mgbe ị na-ese azụ, ọ dị gị mkpa ịgbanye ọnọdụ a maka sekọnd ole na ole.
Rebenoklezhit na afọ ya ma na-agbatị, na-agbatị ogwe aka ya na ụkwụ ya n'otu akụkụ nke ogo 30-45 n'ihe banyere ahụ.
N'ịbụ onye na-egbu egbu, nwa ahụ na-emegharị ụkwụ ya, dịka mgbe ọ na-agba ịnyịnya ígwè.
Na-agba ọsọ 20-30 sekọnd.
18. "Na-agafe n'olulu ahụ"
Weta oche abụọ. Nwatakịrị ahụ ga-eguzo n'akụkụ anọ ọ bụla ma na-arahụ site na "ọwara." Mgbe ahụ bilie ma megharịa mmegharị ahụ.
Na-agba ọsọ ugboro 2-3.
Rebenokoizobrazhaet otú heron na-eje ije. Aka n'azụ ya azụ. Ọ na-ebuli ụkwụ ya, na-ehulata n'egedege ihu ya, na-agbatị ma na-agbada. Ya mere, ọ na-aga n'ihu, na-ebuli, na-ehulata ma na-agbada aka ekpe na aka nri ya.
Oge 20-30 sekọnd.
20. "Ịmụta na-eje ije n'ụzọ ziri ezi"
Nwatakịrị ahụ na-ede akwụkwọ n'isi ya ma na-eje ije ka ọ ghara ịda.
Ndị na-arịa ọrịa na ihu na ụmụaka
Ojiji na nsogbu nke iji eriri na ụmụ ọhụrụ
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere nnukwu ahụ ọkụ?
Ezigbo ụra na nwa gị
Kedu esi eji abụba na-emeso ụmụaka
Ahụ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ
Acetone na mmamịrị n'ime ụmụaka
Ihe ndekọ nke Julian Mac Mehon
Akwụkwọ nri na-apụta
Nkwenkwe ụgha na-ezighị ezi banyere nkà mmụta ọgwụ n'oge a
Ịsa jijiji na Scottish: ịgba akaebe, uru, imegide ya
Ihe nzuzo nke ịma mma: ugu ihu ihu
Karọt na apple smoothies
Kedu ka ọnụ ọgụgụ si emetụta ego?
Shea butter, ọgwụ ọgwụ
Igwe uzo di iche iche: ihe ndi ozo maka nwa nwanyi na-ejiji
Tiramisu na raspberries
Cutlets si broccoli
Kedu otu esi kụziere nwa na ite?
Ogwurugwu: uru ya na nsogbu ya
Njirimara ọgwụgwọ nke mmamịrị
Ahụike Ụmụaka na Ọdịdị Siri
Ime na ọgwụ